चीन पु पहिया निर्माता र आपूर्तिकर्ता | रुईआई
कार मर्मत र्‍याम्प
बीच कार र्याम्प
बगैचा उपकरण फूल र्याक फ्लावर हाउस
आउटडोर फुर्सत वाहन
पाल्तु जनावरको बार
राम्रो गुण, व्यावहारिक र सरल, ठूलो असर क्षमता, लामो सेवा जीवन, सुविधाजनक असेंब्ली।
स्टिल वा कास्ट फलाम जस्ता कडा पाels्गाहरूको तुलनामा जब शल्यक्रिया सञ्चालनमा छ किनभने औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा PU व्हीलहरू एक लोकप्रिय विकल्प हो। PU पाels्ग्रा एक आघात अवशोषकको रूपमा र सवारीलाई कुशनमा मद्दत गर्दछ। यसले असमान इलाकाबाट बम्पहरू पनि अवशोषित गर्दछ। इस्पातको सट्टा PU Wheel प्रयोग गर्नाले तपाईंको कर्मीहरूको श्रवण रक्षा गर्न मद्दतको लागि आवाजको स्तरलाई कम गर्न सक्दछ।
पु पा whe्ग्रा औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा लोकप्रिय विकल्प हो किनभने स्टिल वा कास्ट फलाम जस्ता कडा पाels्गाहरूसँग तुलना गर्दा शल्यक्रियाले शल्यक्रिया गर्दा। PU पाels्ग्रा एक आघात अवशोषकको रूपमा र सवारीलाई कुशनमा मद्दत गर्दछ। यसले असमान इलाकाबाट बम्पहरू पनि अवशोषित गर्दछ। स्टिलको सट्टा PU Wheel प्रयोग गर्नाले तपाईंको कर्मचारीहरूको सुनुवाईको रक्षा गर्न मद्दतको लागि आवाजको स्तरलाई हदसम्म कम गर्न सक्दछ।
पु पा whe्ग्रा अनुप्रयोगहरूमा नियम दिनुहोस् जहाँ भुइँ संरक्षण महत्त्वपूर्ण छ। PU पाels्ग्राले नक्कल गर्छ र कठिन पा wheel्ग्राहरू, जस्तै नायलॉन जस्ता भन्दा ठुलो पदचिह्न सिर्जना गर्दछ। यो ठूलो सतह क्षेत्र भुइँहरूमा तनाव एकाग्रता कम गर्न र तिनीहरूलाई लामो अवधिको लागि राम्रो आकारमा राख्न मद्दत गर्दछ। बिरुवाहरूका लागि जसका फ्लोरहरू महँगो छन् र तपाईंको अपरेशनको लागि महत्वपूर्ण छन्, PU व्हील रूचाइएको छनौट हुन सक्छ।
अर्को लाभ पु पा whe्ग्राऔद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा सामग्रीको घर्षणको गुणांक हुन्छ। यो मानले दुई निकायहरू बीच घर्षणको बल र उनीहरू सँगै थिच्ने बलको अनुपात वर्णन गर्दछ। राउगर सतहहरूको उच्च प्रभावकारी मानहरू हुन्छन् जबकि मिहिन सतहहरू कम हुन्छन् घर्षणको कारणले गर्दा तिनीहरू सँगै थिच्दा उत्पन्न हुन्छ।
पु पा whe्ग्रा ग्रिप्पी सामग्री हुन जान्छ, त्यसैले यसको घर्षणको उच्च गुणांकले टोउड गाडाहरूलाई पल्टिनबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। स्लाइडिंगको रूपमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू कडा ह्विल सामग्रीहरूका लागि समस्या हुन सक्छ।
पु पा whe्ग्रा यसले पाels्ग्राहरूलाई ड्राइभ गर्न उत्कृष्ट कर्षण प्रदान गर्दछ र व्हीलिंगमा लोडको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्दछ इच्छित ड्राइभिंग बल प्राप्त गर्न।
ब्राण्ड रुइआई उपकरण कार
नाम आउटडोर उपकरण कार
सामग्रीको बनावट अक्सफोर्ड कपडा + फलाम पाइप
आकार *२ * * 56 * C सेमी
टन्डल स्प्रे उपचार
असर १K० केजी
प्याकिंग एकल बाहिरी झोला
NW / GW १२ किजी / १K केजी
Scenario परिदृश्य प्रयोग गर्नुहोस्
केहि गाडीहरुमा पा Whe्ग्रा
Installation स्थापना प्रयोग गर्नुहोस्
विशिष्ट स्थापनाको लागि उत्पाद पुस्तिका हेर्नुहोस्
वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
♦ ग्राहक प्रतिक्रिया
राम्रो पकड, पर्ची गर्न सजिलो छैन, धेरै लगाउने प्रतिरोधी, आरामदायक प्रदर्शन
उत्पत्तिको गति किंगदाओ, चीन
आपूर्ति क्षमता 50000 Piece / Pieces प्रति वर्ष
प्याकेजि Deli डेलिभरी
प्याकेजि Details विवरण कार्बन बक्स
चीनमा पोर्ट क्विन्डाओ पोर्ट
नेतृत्व समय- मात्रा (टुक्रा) १-00००> E०० ईस्ट। समय (दिन)
अघिल्लो: पाल्तु जनावरको बार
अर्को: रबर व्हील
प्रश्न: के तपाईंको उत्पादले पाहुनाको लोगो ल्याउन सक्छ?
Q: के तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू चिन्न सक्नुहुन्छ?
प्रश्न: तपाइँका उत्पादनहरू कसरी बनेका छन्? त्यहाँ के सामग्रीहरु छन्?
A: आत्म विकसित वा अनुकूलित सामग्री: इस्पात, फलाम, प्लास्टिक, कपडा, आदि
Q: तपाइँको मोल्ड विकासले कति समय लिन सक्दछ?
A: days दिन
Q: तपाइँ मोल्डको लागि चार्ज गर्नुहुन्छ? यो कति छ? के म यो फिर्ता गर्न सक्छु? यो कसरी फिर्ता गर्ने?
A: शुल्क मोल्ड शुल्क, ग्राहकको विशिष्ट उत्पाद स्थिति र मात्राको आधारमा उद्धरण।
Q: तपाईंको मोल्ड सामान्य रूपमा कहिलेसम्म काम गर्दछ? दैनिक कसरी कायम गर्ने?
A: प्रत्येक मोल्डको क्षमता
प्रश्न: सामान्य सफाई र मर्मत गर्ने कति वर्ष हो?
A: उत्पादन क्षमता विभिन्न मोल्डहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ।
प्रश्न: तपाईंको उत्पादन प्रक्रिया के हो?
A: ग्राहकले उत्पाद मात्रा, शैली, उद्धरण, सम्झौता, भुक्तानी, उत्पादन र वितरण निर्धारण गर्दछ
प्रश्न: तपाईंको सामान्य उत्पादन डेलिभरी समय लिन कति समय लाग्छ?
A: २- months महिना, विशिष्ट आधार र मात्रा
प्रश्न: के तपाईंसँग तपाईंको उत्पादनहरूको लागि न्यूनतम अर्डर मात्रा छ?
A: यदि हो भने, न्यूनतम अर्डर मात्रा कति हो? होइन,
प्रश्न: तपाईंको कम्पनी कति ठूलो छ? वार्षिक उत्पादन मूल्य के हो?
A: square०० वर्ग मीटर, उत्पादन मूल्य billion० अर्ब
प्रश्न: तपाईंको उत्पादनहरूको सेवा जीवन कति लामो छ?
A: औसत उत्पादन स्थितिमा निर्भर औसत on--5 वर्ष,
प्रश्न: तपाईका उत्पादनहरूका विशेष कोटीहरू के हुन्?
A: १। कार मर्मत र्‍याम्प
२. आउटडोर मनोरन्जन वाहन
Garden. बगैचा उपकरण (फूल र्याक र ग्रीनहाउस)
Pet. घरपालुवा जनावरको घेरा
Garden. बगैचा उपकरण कार
P. पु व्हील
Rub. रबर पा wheel्ग्रा
At. Atv र्याम्प
प्रश्न: तपाईंको स्वीकार्य भुक्तान विधिहरू के हुन्?
A: बैंक स्थानान्तरण
प्रश्न: कुन समूह र बजार तपाईंको उत्पादनहरू उपयुक्त छन्?
A: साधारण दैनिक जीवन समूहहरू,
प्रश्न: कुन देशहरू र क्षेत्रहरूमा तपाईंको उत्पादनहरू निर्यात गरिएको छ?
A: संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका, युरोप, आदि
Q: के तपाइँको उत्पादन लागत प्रभावी छ? के खास फाइदाहरू छन्?
A: हो, उही उत्पादन, हामीसँग राम्रो सामग्री र मूल्य छ।
Q: के तपाईंको कम्पनीले प्रदर्शनीमा भाग लिन्छ? के विवरणहरू छन्?
A: प्रदर्शनीहरु, चीन आयात र निर्यात मेला, आदि मा भाग लिनुहोस्
लिफ्ट कार मर्मत र्‍याम्प
बगैचा उपकरण फूल र्याक फूल घर
ठेगाना: हुंडा रोड, लिंगang औद्योगिक पार्क, वेस्ट कोस्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट, क्विंगदाओ शहर, शेन्डोंग प्रान्त, चीन
चीन पु फोम व्हील, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, कास्टर व्हील, चीन कंक्रीट मिक्सर, पु व्हील, China PU Wheel,